Nhau - Bamboo decking care-kuchenesa uye matipi ekuchengetedza
Bamboo decking care-kuchenesa uye matipi ekuchengetedza
Bamboo rudzi rwakasimba rweuswa hwakakosha pakugadzira materu akaomarara uye mapuranga ekushongedza. Dhizaini yemishenjere inoita kuti gadheni rako riitike uye riite rakanaka. Kunze kwepasi kunorema bamboo inoshandisa yakanakisa yemishenjere zvinhu, uye inoitwa kuburikidza nekukanda tekinoroji yekugadzirisa. Iyo inorema bamboo pasi haina-chepfu, isina hwema, yakasimba uye yakagadzikana, uye inopesana nezvipembenene. Ndiyo sarudzo yakanakisa yenzvimbo dzekunze, senge mapaki, nharaunda, zvikwere, nezvimwe.
Nekudaro, yekunze bamboo pasi inogona kusviba uye kuchena nekufamba kwenguva. Kuchenesa kwakakodzera uye kugadzirisa zvakakosha kuchengetedza dhizaini riine runako sezvinobvira.
1. Sei zvichikosha kuita kugadzirisa?
Pane zvinhu zvakawanda zvinokanganisa mabhodhi ekushongedza, akadai semashizha, mukume, chando, mvura kana kupenya kwezuva. Mamiriro ekunze akasiyana munzvimbo dzakasiyana ane zvakawanda zvinokanganisa pakuonekwa kwemabhodhi emishenjere. Mumamiriro ezvinhu akadaro, mabhodhi ekushongedza anozowana yakasviba, kutsvaira ruvara uye inogona kuwana zvimedu uye kutsemuka. Saka zvakakosha kuti uite imwe yekuchengetedza kuitira kuti dhizaini rako riite zvakanaka.
2. Maitiro ekugadzirisa?
Bamboo decking board, kunge tropical hardwood decking, zvinodikanwa kuigadzirisa nemvura-base mafuta (semuenzaniso Woca oiri) kamwe chete pagore. REBO inoratidza kuti iwe unoita yakachena uye yakapusa kugadzirisa pakarepo mushure mekumiswa kwedare rekucheka, kune kumwe kukwenya kuchaitwa panguva yekumisikidzwa.
Heano mamwe matipi eereferenzi:
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kusarudza zvimwe zvakakodzera maturusi ekuchenesa mapuranga.
1) Chenesa iyo decking board: geza nemvura kana kushandisa yakakosha kuchenesa kubvisa mucedine uye tsvina wozoichenesa nebrashi.
2) Ita shuwa kuti mabhodhi ekucheka anowoma zvakasikwa uye wozora mafuta emvura ekunze.
3) Dzivirira iyo inochengetedzwa nzvimbo kusvikira oiri yaoma zvakasikwa.
Heano mavara akasiyana e REBO M-akateedzana (ari pakati kabhoni) uye D-akateedzana (akadzika kabhoni)
Kugara uchichengetedza kwekunze kunorema bamboo huni huriri kunogona kuchengetedza huwandu hwese hwekugadzika pasi, uye hazvinetsi kuzvichengeta. Saka kana iwe uchida dhizaini rako rinotaridzika serakanaka sepakutanga, kugadzirisa kunonyanya kukosha. Zviri nyore kushanda kwauri, handiti? Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota inzwa wakasununguka kusaonana nesu.
Post nguva: May-07-2021